Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Dominica » Ny hotely hotely Kempinski Hotels dia manitatra any Amerika amin'ny fananana Dominica mihaja vaovao
Ny vondrona hotely lafo vidy taloha indrindra any Eropa dia mirehareha amin'ny fitondrana lova manankarena amin'ny serivisy manokana sy fandraisana olona tsy manam-paharoa amin'ny toerana itodiana farany any Amerika. Ny Cabrits Resort & Spa nandrasana hatry ny ela Kempinski Dominica dia hanokatra ny varavarany ho an'ny vahiny sy ny mpanjifa manokana amin'ny 14 Oktobra 2019. Ny fialantsasatra dia ho faharoa amin'i Kempinski Karaiba ny fizahan-tany sy ny fialantsasatra kintana dimy voalohany an'i Dominica.
"Ny fahatongavana an'ity tetikasa ity ho zava-bita iray dia zava-dehibe iray niavaka ho an'ny Hotely Kempinski," hoy i Michael Schoonewagen, Tale Jeneraly, Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica. "Tena reharehanay ity fananana ity satria hanome ny mpandeha ny fahafahany miaina an'i Dominica tsy mbola nisy toy izany tamin'ny alàlan'ny fanangonana ny fisondrotan'ny Kempinski fotoana tsy manam-potoana miaraka amin'ny tontolo madio sy tsy voakitika ao amin'ilay toerana hamoronana traikefa miavaka izay mihaona amin'ny zava-boary."
Nosy natiora any Karaiba
Miorina eo anelanelan'i Guadeloupe sy Martinique, ilay nosy Dominica tsara tarehy sy tsy misy simba no tsiambaratelo nafenina tsara indrindra any Karaiba. Tafasaraka amin'ny fizahan-tany be dia be, ny nosy dia manintona ireo mpivarotra eco sy ireo maniry te hiala amin'ny fiainana andavanandro. Voahodidin'ny Cabrits National Park, ny endrika tsy manelingelina an'ny resort dia manome voninahitra sy mitahiry ny hatsarana voajanahary sy ny tontolo iainana an'ity nosy volkanika manaitra sy tsy voadinika ity. Ny toeram-pialan-tsasatra dia manolo-tena hiaro ny maha-azo itokiana an'ity paradisa madio ity ho an'ny mpandeha ho avy, raha anio kosa dia manolotra traikefa manan-karena manankarena izay miteraka fifandanjana voajanahary eo amin'ny tany sy ny ranomasina.
Efitra handehanana eny amin'ny kianja filalaovana natiora
Voasaron'ny tendrombohitra ala sy ala tropikaly maitso i Dominica, fantatra fa manana nosy "maitso" amin'ny fitsiriritana ny nosy Karaiba hafa. Raha ny marina, rehefa nilaza ny famaritana an'i Dominica tamin'i Queen Isabella avy any Espana i Christopher Columbus dia very hevitra. Ankehitriny, 500 taona mahery taty aoriana, dia mbola tsy miteny ny mpitsidika ireo tampon-tanety sy lohasaha ary tany feno zana-trondro.
Mampiantrano karazan-javamaniry sy zavamaniry isan-karazany, ao anatin'izany ny zavamaniry, biby ary karazam-borona tsy fahita firy, Dominica dia arovan'ny rafitra zaridaina voajanahary midadasika izay misy zaridainam-pirenena telo, tahiry ala roa ary ny Syndicate Parrot Reserve. Ireo mpikaroka fitsangatsanganana dia afaka mankafy fitsangantsanganana eco amin'ny làlana fitsangantsanganana tsy tambo isaina, fijerena vorona na fandinihana fotsiny ny bibidia amin'ny toerana voajanahariny.
Dominica koa dia loharanon'ny loharano mafana faharoa lehibe indrindra manerantany ary ahitana renirano 365, iray isan'andro isan'andro, ary koa riandrano mikoriana ary, mazava ho azy, ny morontsiraka misy fofonaina, manomboka amin'ny fary fotsy sy fasika volkanika mainty. Miaraka amoron'ny morontsiraka sy haran-dranomasina marobe, Dominica koa dia manolotra antsitrika sy snorkeling kilasy an'izao tontolo izao ho an'ny fisitrihana anaty rano izay mahatsiaro tena tsy ho an'ity tontolo ity.
Volavola noforonin'ny natiora
Ny efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny 151 ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra dia tendrena tsara avokoa, manomboka amin'ny efitrano deluxe sy ambony misy fijery an-tendrombohitra na ranomasina ka hatrany amin'ny efitrano malalaka sy duplexes misy efitrano fatoriana roa ary efitrano fandraisam-bahiny. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny hatsaran'ny natiora nosy, ny tsirairay dia mampiseho paleta miloko amoron-dranomasina, lantom-peo amin'ny antsipirihany ary jiro voajanahary be dia be, mitondra ny hakanton'ny any ivelany. Na dia lavitra aza ny tontolo dia ho hitan'ny vahiny eo an-tanan-dry zareo avokoa ireo fampiononana maoderina an-trano. , manomboka amin'ny televiziona fisaka sy serivisy Wi-Fi maimaim-poana ka hatramin'ny milina espresso ao amin'ny efitrano ary kojakoja fandroana mihaja.
Ho an'ny traikefa farany an'ny Cabrits, ny Presidential Villa mirefy 4,585 metatra toradroa dia ahitana fomba fijery mahavariana amin'ny ranomasina, serivisy fitokanana voatokana, fidirana ao amin'ny lobby manokana, efitrano fatoriana roa, efitra fandroana roa sy sasany, efitrano fisakafoana, efitrano spaokana misy sauna sy efitra lehibe iray Terras ho an'ny fisakafoanana ivelany, feno grill sy dobo manokana. Chef tsy miankina iray koa azo alaina amin'ny fangatahana.
Andro firavoravoana ho an'ny fahatsapana
Ny antsipirihany rehetra momba ny zavatra niainan'ny vahiny tao amin'ny Cabrits Resort sy Spa Kempinski dia nojerena tsara mba hahafahan'ny vahiny mahatsapa, manimbolo, mahita, maheno ary manandrana izay omen'i Dominica. Raha ny fahitana azy amin'ny fahandroan-tsakafo, ny trano fisakafoanana telo mampiavaka ny toeram-pialan-tsasatra dia ahitana nahandro eo an-toerana sy iraisam-pirenena ary koa ny fisakafoanana "an-databatra" sy "fisakafoanana an-dranomasina"
Ny trano fisakafoanana sonia ao amin'ilay toeram-pivarotana, Cabrits Market, dia manome loko miloko sy tsiro manondro ny tsenan'ny Creole. Toeram-piantsonana buffet interaktifam-pifandraisana isan-karazany dia misy saran-dàlana iraisam-pirenena marobe avy any Italie ka hatrany amin'ny barbeque ka, mazava ho azy, sakafo hariva misy foto-kevitra Creole sy sakafo atoandro matavy.
Ny Kweyol Beach Café dia mivezivezy tsy manam-paharoa amin'ny bara amoron-dranomasina Creole nentim-paharazana miaraka amin'ny fomba avo. Manolotra fifangaroana matsiro amin'ny lovia Creole, toerana ankafizin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tsiro gilasy vita an-trano toy ny voanio, ity trano fisakafoanana misy ranomasina ity dia tsy maintsy atao ho an'ny mpitsidika rehetra.
Bonsai dia manolotra nahandro Pan-Azia ho safidy mahaliana amin'ny trano fisakafoanana sy fisotroana amoron-dranomasina lehibe. Bonsai dia manolotra dia mahaliana mamakivaky an'i Azia miaraka amina sushi, sashimi, satays, curries Thai, lovia wok-sautéed ary maro hafa.
Miaraka amin'ny seza anatiny sy ivelany, ny Rumfire Bar dia toerana mety indrindra hamaranana ny andro, mijery ny masoandro milentika rehefa misotro zava-pisotro na mankafy sigara tsara. Ny mixologist manam-pahaizana momba ny bar dia manomana ny cocktail mahazatra sy ny zavaboary tany am-boalohany izay mampiasa ny tsena Karaiba any an-toerana sy ny fanahy maizina.
Ny famoahana ireo traikefa mahatalanjona ao amin'ny resort dia ny Kempinski Spa 18,000 sq. Afaka misafidy traikefa momba ny fahasalamana anaty sy ivelany ny vahiny, manakaiky ny natiora ary mamorona fifandraisana amin'ny tontolo iainana manokana. Ny menio feno an'ny spa dia misy fitsaboana entanin'ny kolontsaina sy ny fahatsapana toerana.
Fivoriana sy hetsika tsy hay hadinoina
Miaraka amin'ny toerana miavaka manatrika ny filentehan'ny masoandro ao amin'ny Douglas Bay Beach sy ny toetr'andro Creole nentim-paharazana, Cabrits Resort & Spa dia manolotra ny toerana tsy manam-paharoa sy mahatalanjona indrindra ho an'ny fivoriana tsy hay hadinoina, fihaonam-pianakaviana ary fotoana manokana. Ny toeram-pialan-tsasatra dia manolotra mihoatra ny 8,000 sq ft ny habaka hetsika an-trano sy an-kalamanjana, ao anatin'izany ny toerana amoron-dranomasina, dobo ary bozaka, ho an'ny fampakaram-bady sy fankalazana ary koa efitrano fivoriana telo, efitrano fivoriana ary amiteiteur ivelany. Ny ekipa hetsika mahay dia afaka manampy amin'ny fisafidianana ny toerana tonga lafatra sy ny menu mifototra amin'ny haben'ny lanonana sy ny safidiny.
WestJet: Sidina bebe kokoa, matetika kokoa amin'ity ririnina ity